Waqtiyada la ciyaarayo horyaalka Talyaaniga oo isbedello loogu sameeynayo Juventus darteed! (Oo waayo?) – Gool FM
Waqtiyada la ciyaarayo horyaalka Talyaaniga oo isbedello loogu sameeynayo Juventus darteed! (Oo waayo?)
Raage April 12, 2017
(Roma) 12 Abriil 2017 – Waxaa lagama fursadaan ah in isbedel lagu sameeyo xilliyada la ciyaaryo kulamada Serie A gaar ahaan todobaadyada 34, 35 iyo 36, kaasoo saamaynaya kulamada Roma-Lazio, Inter-Napoli, Milan-Roma iyo Roma-Juventus.
Isbedelka lagu sameeynayo aminta kulamadan la dheeli doono ayaa ku xirraan doona haddii ay Juve usoo baxdo nus-dhamaadka Champions League.
Haddii ay Barcelona oo ay 3-0 ku hoggaaminayaan soo dhaafaan, waxaa ciyaarta Atalanta-Juventus loo riixi doonaa Jimce 28 Abriil 21.45. Haddiise Juventus la reebo Torino-Sampdoria ayaa Sabtiga la gayn doonaa Abriil 29, 21.45.
Sidoo kale Derby-ga Torino ayaa loo weecin doonaa Jimce Maajo 5 saacadda 21.45 haddii kulanka Juve ee nus-dhamaadka Champions League uu noqdo Talaado Maajo 2.
Haddii ay taasi dhacdo, sidoo kale waxaa la wareejin doonaa Napoli-Cagliari oo dheeli doona Sabti Maajo 6 saacadda 21:45, iyadoo isku aadka nus-dhamaadka Champions League la samaynayo Abriil 21, derby-ga Roma ayaa isaga laga dhigi doonaa xilliga qadada ama duhurkii.
Sabti Abr 29
Torino-Sampdoria (17.00 UK, 16.00 GMT)
Atalanta-Juventus (19.45 UK, 18.45 GMT)
Axad Abr 30
Roma-Lazio (11.30 UK, 10.30 GMT)
Inter-Napoli (19.45 UK, 18.45 GMT)
Sabti Maajo 6
Napoli-Cagliari (17.00 UK, 16.00 GMT)
Juventus-Torino (19.45 UK, 18.45 GMT)
Axad Maajo 7
Udinese-Atalanta (11.30 UK, 10.30 GMT)
Milan-Roma (19.45 UK, 18.45 GMT)
Sabti Maajo 13
Fiorentina-Lazio (17.00 UK, 16.00 GMT)
Atalanta-Milan (19.45 UK, 18.45 GMT)
Axad Maajo 14
Inter-Sassuolo (11.30 UK, 10.30 GMT)
Roma-Juventus (19.45 UK, 18.45 GMT)
IIBKA AC MILAN: Guddigii Fulinta ee AC Milan oo lakala diray